तपाईंको सामग्री चोर्नबाट चोरहरू कसरी रोक्ने
बिहीबार, जुलाई 8, 2010 शुक्रबार, जुन 15, 2018 Douglas Karr
यस हप्ताको सुरूमा, तपाईं मध्ये कोहीले याद गर्नुभयो कि मैले ब्लगरको पछि लागें जसले सामग्री चोरी गरिरहेका थिए Martech Zone। कहिलेकाँही, यस्तो हुन्छ जब कोही उत्साहित हुन्छ र निर्णय गर्दछ कि त्यसले मेरो दर्शकलाई विस्तार गरेर मेरो पक्षमा गरिरहेको छ। होइन। यस जोकरले पनि तेस्रो-पार्टी साइटमा लेखकको रूपमा आफ्नो नामको साथ पोष्ट प्रकाशित गर्‍यो। स्वीकार्य छैन।
यो केटाले आफ्नो ब्लगर ब्लगमा चोरी पोस्ट पोष्ट गर्दछ। त्यो स्मार्ट थिएन, किनकि ब्लगरले डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार ऐन (DMCA) टेक-डाउन नोटहरूको पालना गर्दछ। मैले ब्लगरको फारम भर्ें र आज सूचना प्राप्त भयो कि तिनीहरूले चोरी गरिएको सामग्री हटाएका थिए।
मँ यसमा ब्लॉगरको समर्थन को धेरै कृतज्ञ छु!
तपाइँको सामग्री चोर्नका लागि कसरी तयारी गर्ने
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि मैले मेरो ब्लग पोष्टहरूमा जानाजानी ब्रेडक्रम्ब ट्रेल छोडिदियो। धेरै विरलै यी चोरहरूले पुन: लेख्न वा सामग्री प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्। यसको सट्टामा, ती एल्गोरिदमहरू लेख्छन् र तपाईंको आरएसएस फिड समात्छन् र यसलाई तिनीहरूको ब्लगमा धक्का दिन्छ। धेरै जसो यो हुन्छ, ब्लगर सचेत छैन। म हो। मैले विकास गरेको एउटा कारण पोष्टपोस्ट प्लगइन यो थियो कि म सम्पादन र मेरो फुटर मा सामग्री थप्न सक्नुहुन्छ। मेरो आरएसएस फिडमा प्रत्येक पोष्टको केही प्रकारको लिंक मेरो ब्ल्गमा फिर्ता छ।
अर्को, मैले सेटअप गरें गुगल अलर्टहरू मेरो सर्म सर्च सर्तको रूपमा (साथै केहि अरूहरू जुन मैले तपाईंलाई भन्न सक्दिन)। अब - प्रत्येक चोटि कसैले मेरो ब्ल्गमा लिंक दिन्छ, म पोस्ट को एक हिस्सा को साथ एक ईमेल चेतावनी प्राप्त गर्दछ। जब यो सतर्कताको मुख्य भागमा मैले मेरो सामग्री पढ्छु यो द्रुत रूपमा चिन्न सकिन्छ।
सायद एउटा डरलाग्दो चीज मैले गर्न सक्ने भनेको यो हो कि म तत्काल iStockPhoto बाट अर्को हप्ता सम्म मेरो सबै पोष्टहरूको लागि छविहरू किन्न। म तस्विरहरु को लागी भुक्तान गरेको हुनाले, यो कानूनी मेरो लागि प्रयोग गर्न को लागी कानूनी छ तर अरू कोही होईन। यदि तपाईं मेरो सामग्री चोर्नको लागि पर्याप्त मूर्ख हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवतः यी खरिद गरिएका छविहरू पनि प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ। अब मसँग मेरो प्रमुख कपीराइट चोरी विरुद्ध लड्न एक प्रमुख निगम Hellbent छ। चाँडो नै मैले प्रकाशित पोष्टहरू देख्ने बित्तिकै म समर्थन मार्फत सम्पर्क गर्दछु iStockPhoto र प्रत्येक पोष्ट रिपोर्ट गर्नुहोस्, छविहरू, तिनीहरूको स्रोत र ती चोरी भयो।
इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा, मलाई यकिन छैन कि iStockPhoto ले कुनै पनि केसको पछि लागेको छ ... ती सबैले पोस्ट हटाए जब मैले तिनीहरूलाई भेटें र उनीहरूलाई भनें। यद्यपि यो मेरो लागि अझै दोषी केही सन्तुष्टि अझै छ। म iStockPhoto साथ एक प्रतिलिपि अधिकार सूट को गलत पक्ष मा हुन चाहन्न। उनीहरूसँग गहिरो जेब र धेरै वकिलहरू छन्।
उनीहरूका साथीहरूलाई भन्नुहोस्
म यसको बारेमा शान्त छैन। म गर्छु Whois.net होस्टिंग कम्पनी र साइटको स्वामित्व भएको व्यक्ति पहिचान गर्न खोज। म पहिले सिधा सम्पर्क गर्न कोसिस गर्दछु। त्यसोभए ईमेलहरू होस्टिंग कम्पनीमा जान्छन्, ट्वीट्स एन्जिएर हुन्छ, र फेसबुक वाल सन्देशहरू पोस्ट हुन्छन्। म फेरि प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सुरु नगरे सम्म म रोक्ने छैन।
मैले पहिले भनेझैं मैले कहिल्यै यो बिन्दु भन्दा टाढा जानुपर्दैन। त्यहाँ सधैं सम्भव हुन्छ कि कोहीले मेरो सामग्री चोरेर अफशोर, लुकाउन सक्दछ, र पछ्याउनको लागि वस्तुतः असम्भव हुन्छ। म त्यस बिंदुमा खोज ईन्जिनहरूमा उनीहरूलाई रिपोर्ट गर्न सक्दो कोशिश गर्नेछु, तर म तिनीहरूलाई यसबाट टाढा जान दिनेछैन। तपाईंले या त गर्नुहुन्न!
यो एक महान पोस्ट हो!
तर म सोचिरहेको थिएँ कि यदि तपाइँ मलाई एक कठिन तर समान परिस्थितिमा केहि सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ।
मानौं कि मानिसहरूले तपाइँको छविहरू र तपाइँको छविहरूको स्क्रिन शटहरू अज्ञात छवि बोर्डमा पोस्ट गर्दैछन् (पढ्नुहोस्: 4chan.org), जुन कुनै कुराको वास्ता नगरेको लागि कुख्यात छ। यदि मलाई यो पोस्ट कसले गरिरहेको छ भनेर पनि थाहा छैन भने म कसरी ती सामानहरू हटाउने बारे जानेछु?
तपाईले केहि चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ:
1) आफ्नो छवि वाटरमार्क। तिनीहरूमा एउटा नोट राख्नुहोस् जुन तपाईंको कम्पनी वा वेबसाइटको नाम भन्छ। iStockphoto जस्ता साइटहरूमा हेर्नुहोस् र तपाईंले यो देख्नुहुनेछ।
2) यो 4chan को नियमहरूमा स्पष्ट छ कि उल्लङ्घनलाई गम्भीर रूपमा व्यवहार गरिनेछ। म तिनीहरूलाई तिनीहरूको सम्पर्क पृष्ठ मार्फत सम्पर्क गर्नेछु http://www.4chan.org/contact - यदि तिनीहरूले जवाफ दिएनन् भने, तिनीहरूलाई Twitter मार्फत सन्देशहरू पठाउनुहोस् वा जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ।
3) अन्तिम खाडल प्रयास: तपाईं तिनीहरूलाई मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यदि साइट विदेशी छैन र यसको मालिकहरू परिचित छन् भने, तिनीहरूको पछि जानुहोस्।
यो निश्चित रूपमा "डगबाट सावधान" श्रेणीमा पर्नेछ।